Jonga kwaye uguqule iifayile ze-dwg kwiinguqulelo ezahlukeneyo ze-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Jonga kwaye ukuguqula iifayile dwg ukusuka iinguqulelo ezahlukeneyo AutoCAD
Ngokubanzi, xa besithumela ifayile ye-dwg kuhlala kukho ingxaki ngenxa yenguqulo abagcinwe ngayo. Nazi ezinye zeendlela zokusombulula ingxaki:
Yiyiphi inguqu ye-dwg
Oku akunakwenzeka ukuchonga, kuba ifayili inokwandiswa kuphela.Dwg okanye .dxf kodwa ayaziwa de sizama ukuyivula.
Ngoko kuyimfuneko ukuqonda ukuba unyaka ngamnye kukho entsha I-AutoCAD inguqulo, nangona kungenjalo minyaka le inefayile entsha. Itheyibhile elandelayo ibonisa iinguqulelo ze-AutoCAD onokuthi ufumane iifayile zazo, unyaka wokukhutshwa kwaye ukuba unenguqulo entsha.
Igama elisemthethweni Unyaka wokukhululwa IiCententarios
I-AutoCAD 1.0 inguqu kwi-AutoCAD 14 1981 ukuya kwi-1997 Nganye nguqulelo inefomathi entsha yefayili
AutoCAD 2000 1999 Kulo nyaka sazisa ifomathi ye-2000 ye-dwg, esasetyenzisiwe ngokubanzi ngamathuluzi e-GIS (gvSIG, i-Manifold GIS, i-Quantum GIS, imizekelo yeenkqubo)
AutoCAD 2004 2003 Ukuqaliswa kwefomathi ye-DWG 2004
AutoCAD 2007 2006 Ukuqaliswa kwefom ye-2007 ifom
AutoCAD 2010 2009 Ukuqaliswa kwefom ye-2010 ifom
I-AutoCAD 2011 ye-Mac 2010 Umbhalo wokuqala we-Mac ukusuka kwi-AutoCAD ingu 12
AutoCAD 2013 2012 Ukuqaliswa kwefomathi ye-DWG 2013
AutoCAD 2014 2013 Iya kukhutshwa ngo-Ephreli ka-2013, isebenzisa ifomathi efanayo yenguqu yangaphambili.
Ukuba ucela ifayile, kuya kufuneka ucele ukuba bayigcine, ke, kwinguqulelo yangaphambili, esiqinisekisa ukuba singayifunda. Ngalo nto, ukuba sine-AutoCAD 2011, sinokufunda iinguqulelo ze-dwg zika-2010 umva; kodwa hayi iinguqulelo zika-2012.
Indlela yokujonga nokuguqula iifayile ze-dwg kwezinye iinguqulelo
Ukusuka kwi-2005 AutoDesk iqalise inkqubo ye-TrueWiew ye-DWG, kwakhona ngaphezu kokubona iifayile ezivela kwiinguqu ezahlukeneyo ezifana ne-TrueConvert ungenza ukuguqulwa kweenguqu ezahlukeneyo esikufunayo.
Ayinakonwaba, ukuba inkqubo iqala ukufakela ngaphandle kokwenza uhlolo olufunekayo ngaphambi kokuba umzuzwana we-.NET 4 zicelo zendalo.
Ngoko akudingeki uqale ukufakela ngaphandle kokuphucula okokuqala. Kule nto kufuneka uye kwikhonkco:
Qaphela ukuba inkqubo icela ukuvala usetyenziso lweMicrosoft olusetyenziswayo, njengesikhangeli. Kuyenzeka ukuba ubonise ukuba ayenzi le nto.
Xa usenzile oku, ukukhuphela inkqubo ye-TrueView, yiya kwesi sixhobo:
Kufuneka ukhupha i-servlet, kwaye kufuneka ukhethe inguqulo (i-32 okanye i-64 bits) kunye nolwimi.
Kwaye kunjalo. Into eseleyo kukufunda amaqhinga enkqubo kwaye uyisebenzise.
Nje ukuba ifayile ivulwe, ukhetho lokuguqula i-DWG lwenza okunye. Inguqulelo ikhethiwe kwaye kukho indlela yokukhetha izinto ezisisiseko ezinje ngenkqubo yokucoca amanqanaba / izitayile ezingasetyenziswanga okanye ukuseta kwakhona useto lokuprinta.
Ewe, unako ukuguqula iifayile ezininzi kwiibhloko.
I-Wattio: Ukusetyenziswa kwamandla kagesi ekhaya
UJean-Paul Joannet uthi:
Ulwahlulo oluya ku-publicity faite:
Andililo ithuba lokuguqula i-Autocad 14
jose alfonso angle ramos uthi:
Ndiyifumana iluncedo kakhulu kwaye yenza umsebenzi ube lula
Facundo Cabrera uthi:
Bangisindisa imihla emininzi yomsebenzi. Yasebenza ngokugqibeleleyo. Into efuneka ndiyitshintshe yinguqulelo ye-NET yendalo. Ngoku icela iNET 4.5 inguqulo. Khangela kuyo kwi-Microsoft iqhagamshelo othumele ngayo kwaye landela amanyathelo.
Francisco Rojas uthi:
Le nguqulo yenguqu yenguqulo yangaphambili kwinguqulelo yangaphambili njenge-2010, isebenza ngokufanelekileyo, siyabonga, kwesi sixhobo, esisisindisa ukuba sikhiphe enye inguqulo kwaye sifake enye into yakutshanje
Sawubona, siyabonga ngeposi, kodwa ndakuxelele ukuba ndiyenzile onke amanyathelo kwaye xa ndicofa kwi-setup ithi Ukuqalisa Ukuqalisa kwaye ihlala khona! ingagqiba ukuqalisa ukusebenza, unayo ingcamango yokuba oko kwenzeka ntoni?